🥇 ▷ Codsiga ugu wanaagsan ee lagu dhageysto raadiyaha mobiladaada ✅
Codsiga ugu wanaagsan ee lagu dhageysto raadiyaha mobiladaada
Ixtiraam 13-Febraayo ilaa 2013 Maalinta raadiyaha adduunka. Maalin xiriir dhow la leh Qaramada Midoobay iyo dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Sannadkan, maalintan muhiimka ah waxaa loogu dabaaldegayaa hal-ku-dheg. “Wadahadal, dulqaad iyo nabad”, oo ujeeddadiisu tahay in la muujiyo in raadiyaha uu ka caawin karo dhagaystayaasha inay fahmaan arrimaha hadda jira isla markaana ay gacan ka geystaan ​​danaha ay ka midka yihiin waxbarashada, caafimaadka ama sinnaanta ragga iyo dumarka.
Reedyowgu wuxuu noqday, dad badan, Indonesia sheyga isgaarsiinta oo aad muhiim ugu ah nolol maalmeedka., kaas oo u horseeday una waafajinaya teknoolojiyadda cusub sida internetka. Waxaa hadda suuragal ah in la dhagaysto ku dhawaad ​​idaacad kasta oo adduunka ka jirta, taasoo suurta gal ka dhigaysa in la sii daayo meel kastoo aan joogno. Marka maanta adigaa Waxaan u soo qaadnaa codsiga ugu wanaagsan ee lagu dhageysto raadiyaha taleefanka gacanta.
Reedyow FM-ta Isbaanishka
Reedyow FM-ta Isbaanishka Tani waa codsi aan ku dhageysan karno raadiyaha gebi ahaanba bilaashka ah taleefannadeena gacanta iyadoo aan loo baahnayn in lagu xiro qalabka dhegaha. Leh tiro aad u tiro badan oo ah xarumaha qaranka, gobolka iyo maxalliga ah, Waxay la jaanqaadeysaa Bluetooth oo waxaa loo habeeyay si aan u dhageysan karno markii taleefanka la xiro ama aan u isticmaalno dalabyo kale. Wax kale oo aan ahayn “Qaab celcelis”, Kubadda cagta ayaa ku jihaysan si ay ula shaqeyso telefishanka si aynaan horay ugu socon, kuna habboon ciyaarista telefishanka inta aan dhageysanno faallooyinka raadiyaha.
Soo dejiso FM Radio Spain (Android)
Soo dejiso FM Radio Spain (iOS)
Ciyaar maqalka Raadiyaha
Iyadoo Ciyaar maqalka Raadiyaha Waad dhageysan kartaa idaacadaha Internetka ee ugufiican xayeysiis la’aan. Diiwaangeliso bandhigyada aad jeceshahay Raadiyaha qaab MP3 ah gabi ahaanba waa bilaash. Qalabkani wuxuu diyaar u yahay inuu kaa caawiyo sidii aad u qulquli lahayd raadiyaha muusikada ee ugu wanaagsan, noo oggolaanaya Ka raadi farshaxan, qaab muusig, luuqad ama waddan si aan u helno saldhigga aan raadineyno, oo ay ku jiraan saldhigyada maxalliga ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay wax ka badan 100,000 saldhigyo ah qaabab MP3 iyo ACC ah Hababka muusikada kala duwan.
Ku soo dejiso Ciyaariyaha Raadiyeyaasha Cod-bixiyeyaasha (Android)
Soo dejiso Dhagaystayaasha Radio Player (iOS)
Soo gal TuneIn Radio Waxaad ka heli doontaa cayaaraha tooska ah ee ugu wanaagsan, muusikada, wararka, baloogyada iyo raadiyaha idaacadaha laga dhageysto adduunka oo dhan hal cod, maxaa yeelay waxay leedahay Maktabadda maqalka ee ugu weyn dunida, toos iyo baahi. Codsigan wuxuu leeyahay kanaalo isboorti oo toos ah, kanaallo muusig gaar ah, wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale leh in kabadan 5.7 milyan oo telefishan iyo in ka badan 100,000 oo idaacado raadiyo adduunka ahDhammaan waa bilaash.
Soo dejiso TuneIn Radio (Android)
Soo dejiso TuneIn Radio (iOS)
Codsiga Beerta raadiyaha Tani waa codsi noo oggolaanaya dhagayso idaacadaha adduunka oo dhan, kaliya adoo wareejinaya kubbada buufinka ah oo u muuqata mar aan bilaabin arjiga. Dhibco kasta oo cagaaran oo aan ku aragno adduunka waxay matalaysaa magaalo. Kaliya taabashada ayaa laqaban doonta dhamaan idaacadaha leh meeshaas si aan uga dhageysan karno tayada codka ugu fiican. Ka sokow taasi, maalin kasta Saldhigyo cusub ayaa lagu daray kuwa joojiyana shaqada waa la cusbooneysiiyaa. inaad had iyo jeer haysato khibrada ugu fiican. Waan dhageysan karnaa raadiyaha, xitaa haddii aan haysanno taleefanka gacanta oo shaashadda laga saaray ama adeegso arji kale.
Soo dejiso Radio Garden (Android)
Soo dejiso Radio Garden (macruufka)
Box Box-ka khadka tooska ah
Box Box-ka khadka tooska ah Kani waa codsi bilaash ah oo noo oggolaanaya inaan dhageysanno raadiyaha internetka, oo ay ku jiraan saldhigyada Spain, Mareykanka, Faransiiska, Argentina iyo dalal kale oo ku yaal Mareykanka, Afrika, Aasiya ama Yurub. Astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah suuragalnimada sameyso liiska inta badan idaacadaha, sidoo kale saacad shaqeed, saacad digniin oo keydi rugteena aad jeceshahay.
Soodajiso Raadiyaha Box Box (Android)
Soo dejiso Raadiyaha tooska ah ee internetka (iOS)